यी बाबु छोरीको तस्वीर देख्दा कस्को पो आँखा रसाउदै न होला र ! | suryakhabar.com
Home विचित्र संसार यी बाबु छोरीको तस्वीर देख्दा कस्को पो आँखा रसाउदै न होला र !
on: १२ असार २०७६, बिहीबार ११:१४ In: विचित्र संसारTags: No Comments
काठमाडौं । साल्भाडोरका बाबु छोरीको तस्वीरले विश्वको ध्यान फेरि एक पटक अमेरिकाको सीमामा बढ्दो आप्रवासी संकटतर्फ तानेको छ । तस्वीरमा अल्बर्टो मार्टिनेज रामिरेज र उनकी छोरी भेनिसा आभालोसको शव घोप्टो परेर नदी किनारमा तैरिरहेको छ । बाबुको टिसर्टभित्र घुसेकी भेनिसाले बाबुको घाँटीमा हात लगाएकी छन् । यसले अन्तिम क्षणसम्म बाबुसँग रहेको बुझिन्छ ।
मेक्सिकोको पत्रपत्रिकाले यो तस्वीरलाई २०१५ मा ग्रीक द्वीपमा डुबेका तीन वर्षे सिरियाली बालकसँग गरेका छन् । तर यसले अमेरिकाको आप्रवासन नीतिमा के प्रभाव पार्छ, त्यो हेर्नभने बाँकी नै छ । उनीहरुको शव मेक्सिकोको माटमोरोस नजिकैको नदी किनारमा खोजिएको थियो, जुन टेक्सासको अन्तर्राष्ट्रिय पुलबाट करिब एक किलोमिटर मात्र टाढा छ ।
नदी किनारमा रहेका कसैले उद्धारकर्तालाई खबर गरिदियो । राति ११ बजेसम्म उद्धारकर्ताले नदीले बगाएका बाबुछोरीलाई खोजे तर, फेला पार्न सकेन । सोमबार बिहान सवा १० बजेतिर उद्धारकर्ताले शव भेट्टाए । बाबुछोरीका शव नदी किनारमा तैरिरहेको थियो । बालिकाको टाउको बाबुको टिसर्टभित्र भित्र घुसेको थियो भने बुवाको घाँटीमा अँगालो हालेकी थिइन् । यही तस्वीरले अहिले विश्वको ध्यान तानेको छ । जब कुनै बाबुले भेलले नबगाओस् भनेर टिसर्टभित्र छोरीलाई लुकाएको तस्वीरले भावुक बनाएको ले डकले बताइन् ।
मेलम्ची खानेपानीः तीन दिनभित्र रकम दाबी गर्न आग्रह
१२ असार २०७६, बिहीबार ११:१४